Madaxweyne Guuleed oo saacadaha soo socdo si deg-deg ah ugu laabanayo magaalada Cadaado – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Guuleed oo saacadaha soo socdo si deg-deg ah ugu laabanayo magaalada Cadaado
War goordhaw nasoo gaaray ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed uu saacadaha soo socdo si deg-deg ah ugu laaban doonno magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, iyadoona xaaladda magaaladaasi ay haatan tahay mid aad u kacsan.
Madaxweyne Guuleed oo maalmihii ugu dambeysay arrimo la-tashi ah u joogay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa haatan lagu wadaa in saacadaha soo socdo uu si deg-deg ah ugu amba baxo magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud.
Xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ee dhawaan xilka ka qaaday madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed ayaa haatan magaalada Cadaado ka wada olole ay ku qaban-qaabinayaan doorashada madaxweynaha cusub ee Galmudug hogaamin doonna.
Guddiga qaban-qaabada doorashada Galmudug oo ay dhawaan sameeyeen xidhibaanada xilka ka qaaday madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa ku eedeeyay madaxweynaha inuu isaga ka dambeeyo qalalaasaha iyo xiisadaha ka jira magaalada Cadaado.
Dhinaca kale, xoghayaha guddigaasi ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabeey uu isna noqday askari ka tirsan ciidanka ilaalada madaxtooyada Galmudug islamarkaana la saftay madaxweyne Guuleed.
Xaaladda magaalada Cadaado ayaa marba marka kasii dambeeysa kasii dareeysa, waxayna xaaladda magaaladaasi noqon doontaa mid faraha kasii baxdo, hadii dadaalka uu haatan wado madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed uu ku guuleysan waayo.